Wararka – Page 29 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya oo beenisay in Turkigu Saldhig Milateri ka furanayo Dalka
October 23, 2016	Leave a comment 30 Views
Xukuumada Soomaaliya ayaa beenisay in saldhig ciidan ay dowladda Turkigu ka sameysatay duleedka magaalada Muqdisho, isla markaana ay imanayaan ciidan ka socda dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in dowladda Turkiga aysan saldhig ka sameysanin Soomaaliya balse ay ka dhistay Dugsi lagu tababarayo Ciidamada Soomaaliyeed. Saldhig Ciidan ayuu Wasiirku ku macneeyay inuu yahay dal heshiis ...
DEG DEG:- Qarax Xoogan oo goor dhow Muqdisho ka dhacay
Qarax weyn ayaa goor dhow oo caawa ah waxaa uu ka dhacay degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho kaasoo daryankiisa laga maqlay meelo badan. Warar hordhac ah ayaa sheegaya in qaraxan oo loo malaynayo inuu yahay ismiidaamin uu ka dhacay agagaarka xarunta idaacada Dalsan oo ku taala nawaaxiga taalada daljirka Dahsoon. Weli faahfaahin rasmi ah ah lagama hayo qaabka uu qaraxan ...
Ciidamadii ugu horeeyey ee AMISOM ah oo la geeyey Cadaado
October 23, 2016	Leave a comment 32 Views
Qeybtii u horeysay Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee Maamulka Galmudug. Ciidamadan oo ka kala socda dalalka Jabuuti iyo Burundi ayaa ka qeyb qaadan doona sugida amniga doorashooyinka dhowaan lagu wado inay ka dhacaan Cadaado. Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug iyo Saraakiil ciidan ayaa soo dhoweeyay ciidamadan ka socday dalalka Jabuuti iyo ...
DEG DEG:- Ciidamadda AMISOM iyo Kuwa Soomaliya oo isaga baxay Halgan iyo Alshabaab oo la wareegay
October 23, 2016	Leave a comment 28 Views
Wararka maaanta ka imaanaya Deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ay iskaga baxeen Degaankaasi Halgan ee Gobolka Hiiraan. Sidoo kale Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Milatariga Soomaaliya ayaa la sheegay in ay horay u sii raaceen Maamulkii Degaanka Halgan Ee Gobolka Hiiraan. Al-shabaab ayaa sidoo kale la sheegay in ay la wareegeen Gacan ...
”Sawirro ” Basas Nuuca aan Xabadaha karin oo lagu wareejiyay Dowlada Soomaaliya
October 23, 2016	Leave a comment 46 Views
Dowladda Turkiga ayaa basas nooca aan rasaasta karin ugu deeqday taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxaana kala wareegaydeeqdaasi safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga Amb Cabdullaahi Maxamed Cali (Sambaloolshe), oo ay wehliyeen howlwadeenno safaaradda ka tirsan. Basaska oo tiradooda ay tahay Labo ayaa loogu talo galay in loogu adeego Maxaabiista Xabisyadda dalka ku xiran ,waxaana Safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ay soo saartay ...
Madaxweynaha Hirshabeelle oo shaaciyey meesha lagu soo xulayo Aqalka sare ee Hiiraan iyo Sh/dhexe
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Cali C/llaahi Cosoble ayaa sheegay in Xubnaha Aqalka sare lagu soo xuli doono Caasimadda Maamul Goboleedka Hirshabelle oo ah Magaalada Jowhar . Madaxweyne Cali C/llaahi Cosoble ayaa sheegay in Dhawaan ay soo gudbi doonaan Liiska Xubnaha Aqalka sare ee Soomaaliya islamarkaana Dadka doonaya in ay ka qeyb qaataan u Tartamida Xubnaha Aqalka sare laga doonayo in ay ...
Maamulka Puntland oo soo dhaweeyey dhismaha Maamulka Hirshabeelle
October 22, 2016	Leave a comment 26 Views
Maamulka Puntland ayaa soo dhoweeyey dhismaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle oo dhowaan lagu dhisay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe. War-saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa loogu hambalyeeyey hogaanka cusub ee loo doortay maamulka Hirshabelle. Puntland waxay sheegtay iney taageero hiil iyo hooba la leh la garab istaagi doonto maamulka cusub ee Hirshabell inta uu cagahiiisa isku taagayo.
Dagaal culus oo markale ka qarxay magaalada Gaalkacyo
October 22, 2016	Leave a comment 29 Views
Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal culus uu goor dhow ka bilowday iyadoo dagaalkaasna uu u dhexeeyo ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug. Dagaalkana ayaa la sheegay in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka nuucyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan dadka ku nool magaalada Gaalkacyo. Illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan ...
Rag la sheegay inay basaasiin ahaayeen oo Alshabaab ku dileen gobolka J/dhexe
October 22, 2016	Leave a comment 31 Views
Dagaalameyaasha Al Shabaab ayaa Galinkii dambe ee Shalay ku Dilay degmada Saakoow ee Gobolka Jubbada Dhexe Saddex Nin oo ay ku Eedeeyen in ay yihiin Basaasiin. Al-shabaab ayaa Saddex Nin ee ay dileen waxaa ay ku sheegeen in ay la shaqeynayeen Dalalka Reer Galbeedka islamarkaana ay Xogta Shabaab Gudbin jireen. Al-shabaab ayaa Gobolka Jubbada Dhexe oo ay Dhamaantii Gacanta ku ...
Deg Deg:- Madaxda Qaranka oo Jowhar kaga qaybgalaya Caleemasaarka madaxda Hirshabeelle
October 22, 2016	Leave a comment 30 Views
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uuu hogaaminayo ayaa Goor dhaw Gaaray Magaalada Jowhar ee Caasimadda Maamulka Shabelleha Dhexe. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa Magaalada Jowhar uga qeyb galaya Caleemasaarka Madaxweynaha Cusub ee Maamulka Hirshabeelle. Ammaanka Magaalada Jowhar ayaa Maanta si weyn loo adkeeyay,waxaana sidoo kale Jowhar dib ugu soo laabtay Madaxweynaha Hirshabeelle oo Magaalada Baledweyne ku Maqnaa. ...